प्रचण्डले भने- बाबुका रूपमा प्रकाशलाई न्याय गर्न सकिनँ – Janaubhar
प्रचण्डले भने- बाबुका रूपमा प्रकाशलाई न्याय गर्न सकिनँ
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४ | 243 Views ||
नेकपा माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´ले बुवाका तर्फबाट लालनपालन र अभिभावकत्वमा प्रकाशलाई अन्याय गरेको बताएका छन् ।
लाजिम्पाटमा अायोजित श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै प्रचण्डले प्रकाश जन्मनुअघि नै अाफू भूमिगत भएको बताउँदै उनको लालनपालन, शिक्षा र अभिभावकत्वमा अाफूले न्याय नगरेको बताएका हुन् ।
लाजिम्पाटमा अायाेजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा अध्यक्ष क. प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभएकाे कृतज्ञता मन्तव्यको पूर्ण पाठ !
यो श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द,
यही मंसिर ३ गते राति आकस्मिक हृदयघातबाट हाम्रा छोरा प्रकाशको असामयिक निधन भयो । उनी जम्मा ३६ वर्षका थिए । ३६ वर्ष संसार बुझ्न र बाँच्न अत्यन्त थोरै उमेर हो । कलिला दुई छोरालाई टुहुरा बनाएर उनी यति थोरै उमेरमै हामीबाट सधैंका लागि बिदा भए ।
म पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेको तीन वर्षपछि २०३८ सालमा प्रकाशको जन्म भयो । म भूमिगत राजनीतिमा थिएँ, कहिलेकाँही मात्र घर आउँथेँ, त्यो पनि राति अबेला आउँथेँ र बिहान झिसमिसेमै हिँडिहाल्थेँ । उनी निरन्तर सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असुरक्षाबीच हुर्किए । सुरक्षाका कारण एकपछि अर्का स्कुल फेर्दाफेर्दै उनको पढाइ लथालिङ्ग भयो । अरु थुप्रै नेपाली युवाजस्तै कलिलैमा हतियार बोकेर क्रान्ति र नेतृत्वको रक्षाका लागि उनी पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए । अहिले सम्झँदा यस्तो लाग्छ, उनी आफ्नो जीवनमा कहिल्यै किशोर हुन पाएनन्, बालकबाट सिधै युवा भए । सक्रिय राजनीतिक जीवनका कारण लालनपालनमा मैले बाबुका रुपमा उनीमाथि न्याय गरिनँ, गर्न सकिनँ ।
केहीले कमरेड प्रकाशलाई केवल मेरो छोरामात्र ठाने र त्यसैमा उनको व्यक्तित्व सीमित गर्न खोजे । तर, उनी प्रविधिमा, संगठनमा र व्यवस्थापनमा अत्यन्त पोख्त थिए । म प्रधानमन्त्री हुँदा र त्यसपछि पनि मेरो निजी सचिवालयमा उनी मेरो छोरो भएका कारण होइन, त्यो भूमिकाका लागि आवश्यक योग्यता र क्षमता भएका कारण जिम्मेवारीमा थिए । उनी अत्यन्त मिडियामैत्री थिए । प्रविधिमा उनको रुचिमात्रै थिएन, दख्खल पनि थियो । व्यवस्थापनमा उनको दक्षता त यहाँहरु सबैले देख्नुभएकै हो । सानैदेखि उनी मेरा लागि छोराभन्दा पनि बढी सहकर्मी र सहयोद्धा भए । म इमानदारीपूर्वक भन्छु, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मेरो दोस्रो कार्यकाल उनको सहयोगबिना सफल हुने थिएन ।
पुत्रवियोग मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो शोक मानिन्छ र रहेछ पनि । शोकको यो घडीमा हामीले देशमात्र होइन, विश्वभरिबाटै हार्दिक समवेदना र सान्त्वना पायौं । नेपालका सबै राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले हामीलाई दिएको समवेदना र ढाडसप्रति हामी ऋणी छौं । हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारतबाट म र मेरो परिवारले निकै छिटो प्रेमपूर्ण समवेदना पायो । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, अफ्रिका र एसियाका विभिन्न देश अनि संसारभरिका थुप्रै कम्युनिष्ट पार्टीले यो शोकमा हाम्रो परिवारप्रति ऐक्यवद्धता र सहानुभूति देखाए । विभिन्न पेशागत, व्यावसायिक र सामाजिक संघसंस्थाले यो शोकमा हामीलाई सान्त्वना दिए । मंसिर ३ गते नर्भिक अस्पतालदेखि पेरिसडाँडा र आर्यघाटसम्म स्वतःस्फूर्त रुपमा उर्लिएको जनसागरलाई मैले क. प्रकाशले छोटो उमेरमा कमाएको प्रतिष्ठाको प्रमाण मानेको छु ।
दश वर्ष लामो नेपाली क्रान्तिकालमा हामीले त्याग, तपस्या र बलिदानका धेरै कीर्तिमान देख्यौं । ‘जीवनको लम्बाई होइन, उचाइँ धेरै हुनुपर्छ’ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र छ । कमरेड प्रकाशको मृत्युपछि नेविसंघ, अनेरास्ववियू र अखिल (क्रान्तिकारी) सँगै युवा संगठनहरुले पनि म र मेरो परिवारलाई संयुक्त सान्त्वना दिए र ‘हामी सबै तपाईका छोराछोरी हौं’ भनेर हाम्रो आत्मबल बढाए । प्रकाश अब छैनन् । तर, देशका हरेक युवायुवतीमा हामीले प्रकाशलाई देखेका छौं । यो देशका सबै युवायुवती हाम्रा छोरा प्रकाश हुन् र तिनको समुन्नत भविष्यका लागि हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी अझ दृढ भएका छौं । हो, हामी शोकाकूल छौं । तर, देश र समाजप्रतिको दायित्व यो शोकमा हामीले अझ बढी महशुस गरेका छौं ।
आफन्तजन, राजनीतिज्ञहरु, पार्टीका साथीहरु, महामहिमहरु, विभिन्न पेशा र वर्गका शुभचिन्तकहरु, यो शोकका क्षणमा यहाँहरुले मनैदेखि दिएको समवेदना र सहानुभूतिले हामीमा धैर्य र हिम्मत थपेको छ । आजको उपस्थितिका लागि म परिवार र पार्टीका तर्फबाट हृदयदेखि नै तपाईहरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
७ मंसिर, २०७४
पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
Prevदाङमा बाम नेताले सम्झिए प्रकाश दाहाललाई
Nextनिर्वाचन विशेषः कृष्णबहादुर महराको एक दिन उदय जीएमको क्यामेरामा